Fanovana am-peo sy horonan-tsary amin'ny Screencast-o-matic sy Audacity. - Geofumadas
Novambra, 2018 Fampianarana CAD / GIS, Pirinty voalohany
Rehefa te hampiseho fitaovana na dingana iray ianao, ny ankamaroan'ny matihanina dia mampiasa fampianarana video amin'ny pejy manokana momba an'io lohahevitra io, ka izany no mahatonga ireo izay manolo-tena amin'ny famoronana atiny haino aman-jery tsy maintsy mihevitra ireo lafin-javatra mety hisy fiatraikany amin'ny loharano mandritra ny famoronana azy ireo. , toy ny audio. Ity lahatsoratra ity dia hampiseho fitaovana sasany hanovana feo sy horonantsary aorian'ny famoronana azy, hahafahan'izy ireo manafoana, mampiditra sary na mampihena ny feo izay mety hanakana ny fahazavan'ilay lesona an-tsary.
Tokony ho entina ho fiheverana fa arakaraka ny fomba-teny ny mpandahateny, ny tontolo iainana izay firaketana an-tsoratra, ary ny fananany toy ny mikrô (anisan'izany ny toerana, lavitra avy amin'ny mpandahateny na namafa), isan-karazany manana feo, toy ny hoe: fofon'aina avoakan'ny tsara fanahy na toaka, feo ivelany toy ny rivotra, orana, dingana, manazava ireo fitaovana (totozy Click na tsindrio), raha manana teny amin'ny taratasy lahatsary azonao atao ihany koa ny mandre ny feon'ny ravinkazo, ankoatra ny maro hafa izay taty aoriana ho sarotra Ny loharanom-baovao multimedia dia mahafinaritra ny mpihaino ary mora takarina.
Kanefa kosa ny ambony dia manolotra ny tutorial momba ny fomba fanondranana, Ovay sy Ampidiro ny teny avy eo rehefa ao ny feo, ary ahoana no hanampy sary famelabelarana sy ny anaram-boninahitra ao amin'ny lahatsary, rehefa vita peo.
Amin'ny voalohany, ny lahatsary fampihetseham-peo izay efa natao tamin'ny alàlan'ny horonam-peo ampiasaina dia nofantenana, amin'ity ohatra ity dia hampiasa iray amin'ny format pdf format. Ho ampiasaina ny rindrambaiko momba ny fanitsiana screencast-o-Matic ho an'ny lahatsary sy sahy ho an'ny audio. Ary koa, ho fampisehoana tsara kokoa, sary iray no hampidirina amin'ny fiandohan'ny horonantsary izay manondro ny momba ilay lesona.
Nanontaniana izahay, momba ny lahatsarin-tsarimihetsika momba ny fandefasana buffer mampiasa ArcGIS PRo, izay tsy maintsy anaovantsika ireto fanitsiana manaraka ireto:
Hanova ny habeny amin'ny 1280 x 720.
Omeo sary sy sary eo am-piandohana sy amin'ny faran'ny lahatsary.
Hanova feo, manadio ny tabataba sy feo tsy misy fanomanana.
Ny filaharan'ny dingana izay asehontsika dia somary voafintina, fa ao amin'ilay horonantsary aseho amin'ny farany dia azo jerena amin'ny antsipiriany kokoa. Alohan'ny hanombohana ny fizotrany dia tsy maintsy apetraka amin'ny solosaina ireo programa voalaza etsy ambony, screencast-o-Matic y sahy,
Dingana 1. Sokafy ny horonan-tsary: Manomboka mizara ilay lahatsary eo amin'ny sehatra izy screencast-o-MaticRehefa misokatra dia haseho ny safidin'ny fanovana izay alaina ny audio izay hovaina aorian'izay ary eo koa ireo fitaovana hametrahana ny sary fampisehoana an'ilay horonantsary. Tsy manazava bebe kokoa momba ny ataon'ny screencast-o-matic izahay satria efa nanao teo aloha lahatsoratra iray teo aloha.
Dingana 2. Overlay sary amin'ny horonan-tsary: Rehefa hanokatra ny Ovay safidy, vaovao fikandrana, izay ny fitaovana dia hita, ny hiditra ny fampisehoana sary ny lahatsary no miseho, dia tsy maintsy misafidy ny safidy takela sary, ny mifanaraka rakitra dia nitady sy eny anelanelany na ny fifanarahana, araka ny fotoana fa tsy maintsy manolotra ilay video ianao.
Dingana 3. Overlay lahatsoratra amin'ny horonan-tsary: Avy eo ny lohateny mifanaraka aminy dia napetraka, ao amin'ny tononkalo superimpose dia voafidy ary napetaka ny mari-pamantarana, ny loko sy ny habe, ary rehefa voaomana, dia nekena ny fanovana.
Dingana 4. Adikao ny sosona amin'ny ampahany hafa amin'ilay horonan-tsary: overlaps roa no adika, na ny baotin'i sary toy ny anaram-boninahitra, napetraka any amin'ny faran'ny ny lahatsary mba hamita ny fomba tutorial, no misy eo amin'ny sarintany farany lahatsary sy ny kopia dia napetany zavatra.
Fanitsiana amin'ny feo
Ho an'ny fanovana feo dia ampiasaina ny programa Audacity, izay loharano maimaimpoana sy misokatra, azonao atao ny manoratra, manova, manafatra ary manondrana feo. Izy io dia manana fiasa toy ny fanaovana nomerika karazana feo avy amin'ny loharano toa ny kasety na rakitsoratra vinyl. Azo ampiasaina amin'ny Windows, Mac OsX, ary Ubuntu izy io, tsy ilaina ny mametraka ny programa satria misy dikan-teny azo entina ihany koa.
Dingana 1. Alefaso amin'ny endrika format .wav ny audio: Rehefa miditra amin'ny safidy fanovana ianao screencast-o-Matic, misy sehatra iray misy ny mozika na ny audio izay ahitana ny horonan-tsary, ity horonam-peo ity dia hivoaka sy hisokatra ao amin'ny format .wav mba ahafahana manitsy ny programa sahy,
Dingana 2. sokafy ny feo amin'ny Audacity: Rehefa avy nisintona ny feo izy dia nanokatra ny programa sahyMiaraka amin'ny File - Safidy misokatra, rehefa tafiditra ao anaty rafitra ianao dia afaka mahita ny sarintany audio izay naondrana avy amin'ny screencast. Maro ny làlana azo alefa ao amin'ity programa ity. Zava-dehibe ny fihainoana ny rakitra iray manontolo mba hamaritana izay faritra hampanginina na hokapaina, dia tokony ho raisina an-tsaina fa raha tapahina ny ampahany amin'ny audio dia tsy hifanaraka amin'ny fotoanan'ny horonantsary izany, soso-kevitra raha misy lesoka hampiasana ilay fitaovana moana ka ny halavan'ny audio dia mitohy mifanandrify amin'ilay horonantsary.
Raha rehefa manokatra ny raki-peo amin'ny programa ianao dia tsy heno, dia satria tsy maintsy alamina ny mikrô, ny menio fanovana - ny tian'ny - ny fitaovana - ny famerenana dia hita ao amin'ny ekipa lehibe. Any ianao dia tsy maintsy misafidy ny fitaovam-pandrenesana izay tena ampiasainao.
Dingana 3. Fihenan'ny tabataba: Ho an'ny fampihenana ny tabataba, segondra ny fahanginana no voafantina, hisamborana ilay tabataba hisafidianana; izany dia atao ao amin'ny menio misy vokany, fihenan'ny tabataba. Avy eo ny rakitra audio iray manontolo dia voafantina amin'ny alàlan'ny fanindriana CTRL + A, na amin'ny menio lehibe dia azonao atao ny mahita ny fitaovana voafantina, ao no hisafidiananao ny safidy, avy eo ao amin'ny menio misy ny fitaovan'ny tabataba fampihenana ny tabataba. Aorian'izay dia misokatra ny varavarankely izay voafaritra ny masontsivana, amin'ity tranga ity dia tazomina ho default izy ireo ary manaiky dia voafidy hampandeha ny fizotrany. Hiseho ny varavarankely iray hafa manondro rehefa nanomboka ny fihenan'ny tabataba sy ny ora novinavinaina hahavitan'ity hetsika ity.
Ao amin'ny Effect sakafo, be dia be ny fitaovana mba ho ampiharina ao an-peo raha ilaina dia hita, dia afaka mamafa feo totozy Click, normalize-peo, manatsara basse ambaratonga, havelako, mamerina, hanery na hanova izay dian'ny.
Dingana 4. Diovy ny feo tsy kasaina: Aorian'ny fihenan'ny feo dia voafaritra fa ny ampahany amin'ny audio dia misy tabataba tsy ampoizina na karazana hadisoana, miaraka amin'ny kursor ny habaka iray manontolo mifanaraka amin'ny tabataba (4) no voafantina, ary ho an'ny marimarina kokoa amin'ny fisafidianana ny bokotra zoom (+) ary (-). Io dia ahafahanao manitatra na mampihena ny sarintany audio ary mamantatra mora foana ny tabataba hoesorina.
Tsindrio ny bokotra: amin'ny alalan'ity bokotra ity no ahitanao ilay sombin-dahatsoratra voafidy amin'ny cursor, izany hoe, dia mamoaka sehatra iray avy amin'ny feo. Raha ilaina ny manapaka ampahany amin'ny feo, tsy manova na manala ny ambiny, dia ampiasaina ny fitaovana fanasan-tsaka.
Mute button: ity bokotra ity dia manasongadina ny feo mampikorontan-tsaina ary manala ny sainam-peo rehetra.
Mivoatra sy mivoaka: manampy amin'ny fanatsarana tsara ny sarin'ny feo.
Mazava ho azy, araka ny hitanao, AudaCity dia mamela anao hanao fanadiovana tabataba bebe kokoa sy fandanjalanjana feo, hahazoana audio tsara kalitao. Amin'ity horonantsary ity dia mifantoka amin'ny fampihenana ny tabataba manodidina sy ny fanadiovana ireo feo tsy kasaina amin'ny fotoana mangina izy.
Araka ny efa hitanao, tsy nampiasa ny safidy hanapahana feo izahay, fa hampanginana ny tabataba tsy voaomana, satria heverinay fa mitazona ny halavan'ny fotoana ny rakitra mba tsy hahafoana ny synchrony amin'ilay horonan-tsary. Raha feo fotsiny io dia azo antoka fa notapahinay izy io mba hampihenana ny fahanginana tsy ilaina, izay ampidirina horonan-tsary na sary ampiarahina amin'ilay audio farany.
Ireo fiasa ireo dia mamela ny fanodikodinam-potoana mora amin'ny làlana iray na maromaro, azonao atao ny manafoana ireo fanovana rehetra raha toa ka tapaka na mangina no apetraka mandritra ny fanitsiana, manana lalan-kely fitendry ihany koa izy. Raha ilaina dia miaraka amina programa ity ianao dia afaka manampy effets feo hanatsarana ny feo, toy ny echo, inversion na ny tonony.
Dingana 5. Alefaso amin'ny Audacity ilay audio novaina: Raha vantany vao vita ny fanovana tanteraka ny rakitra audio dia aondrana any amin'ny format .wav, (na izany aza misy safidy hafa toy ny .mp3, -aiff, .ogg na .au) ao amin'ny fisie menu - manondrana toy ny .wav, ity dingana ity dia vita mba hampidirana azy io indray amin'ny alàlan'ny horonantsary screencast-o-Matic,
Dingana 6. Amboary ny habeny video canvas: Rehefa vita ny fizotran'ny fanovana horonam-peo sy horonan-tsary dia voatahiry ny rakitra, raha jerena fa raha mila sary an-tsaina tsaratsara kokoa ny haben'ny horonantsary dia tokony ho 1280 x 720, raha tsy mifanaraka amin'ity habe ity ny horonan-tsary. azo ovaina ho canvas safidy amin'ny fisafidianana 720p HD. Ny programa dia mamela na manampy ny fiaviany mainty amin'ny habeny tsy saron'ny horonantsary voalohany, na manitatra ilay efa misy mba hifanaraka na dia very ampahany aza satria tsy nitovy refy ny horonan-tsary.
Rehefa heverina ho vonona izany, dia atambatra ny bokotra Natao, ho an'ny faran'ny anarana, endrika, dia milaza na ny kitondro dia miseho, ny toerana misy ny lahatsary no naondrana ary farany ny Output kalitaon'ny ny fandraisam-peo eo ambany, ara-dalàna, na dia avo ny lahatsary farany voafantina no navoaka.
Samy mpampiasa manolotra fandaharana ao amin'ny fanovana ny tsy hanahirana fitaovana dia mora ny mianatra hanao dingana ireo, indrindra ho an'ireo izay anisan'ny 2.0 efitrano fianarana ary mampiasa izany ho toy ny loharano fampianarana.
Ny horonantsary aseho dia famintinana. Raha te hanana fidirana amin'ilay horonantsary feno ianao dia angataho amin'ny alàlan'ny mailaka na whatsapp izay ao amin'ny lohatenin'ity tranonkala ity.
Previous Post«Previous Fivoriam-be fanao isan-taona ao amin'ny tambajotra iraisam-pirenena Amerikana an'ny Cadastre sy ny firaketana an-tanety
Next Post Fiantraikan'ny fiovàna avy amin'ny ArcMap mankany ArcGIS Promanaraka »
Valiny iray amin'ny "Fanovana am-peo sy horonan-tsary amin'ny Screencast-o-matic sy Audacity."
Anonimo hoy izy:
Manazava mahafaty ianao, tsy misy takatra izay hatao….